राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ज्ञवाली हटाउने प्रचण्ड, महरा र निधिको खेल असफल – Maitri News
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ज्ञवाली हटाउने प्रचण्ड, महरा र निधिको खेल असफल
काठमाडौ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख सुशील ज्ञवालीलाई हटाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रयास विफल भएको छ । नेकपा एमाले कडारुपमा प्रस्तुत भएपछि सो प्रयास विफल भएको हो । प्राधिकरणको निर्देशक समितिक बैठकमा समितिका उपाध्यक्ष समेत रहेका नेकपा एमालेका नेता भीम रावल कड्किएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गल्ती स्वीकार गर्न वाध्य हुनुभयो ।
समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले बैठक सुरु गर्न खोजेपछि एमाले नेता रावलले आपत्ती जनाउँदै एक महिना ढिलो गरी बैठक किन सारेको भन्दै प्रश्न उठाउनुभयाये । रावलको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले गृहकार्य नपुगेकोले बैठक एक महिना ढिलो भयो, यसमा कमजोरी भयो भन्दै बैठक सुरु गर्नुभएको थियो ।
वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई हटाउने कसरतमा रहेको कांग्रेस र माओबादी केन्द्रकातर्फबाट उपप्रधानमन्त्री रहेका बिमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महराले बैठकमा समेत ज्ञवालीमाथि काम गर्न नसकेको भन्दै आरोप लगाउनुभयो । जवाफमा एमाले नेता रावलले उल्टै निधि र महराको सातो लिनुभयो ।
रावलले ‘प्राधिकरणलाई जनशक्ति र बजेट किन उपलब्ध नगराएको ? बजेट पनि नदिने र कर्मचारी पनि नदिने हो भने प्राधिकरणले काम कसरी गर्न सक्छ ? उल्टै प्राधिकरणलाई आरोप लगाउन पाइन्छ ? एमाले नेता रावलले प्राधिकरणबाट हुने काम विभिन्न मन्त्रालयबाट आफू खुशी गर्न थालिएको र मन्त्रालयहरुले सहयोग नगरेकोमा को दोषी हुने, सरकार कि प्राधिकरण ? भन्दै प्रश्न गरेपछि प्रचण्ड, महरा र निधि अनुत्तरित बन्नु भयो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माण कोषमा २८ अर्ब रुपियाँ जम्मा भएको तर प्राधिकरणले योजना र कार्यक्रम अनुसार खर्च गर्न नपाएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिमा विपक्षी दलका नेता उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । समितिको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको तर्फबाट उपाध्यक्ष रावलले नियमित प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ । ।